Ukufakwa Kobuciko Ikusasa Ubona Uletha ubuhle bokwethemba okutholwe umuntu osemusha wokudala - abacabangi bakusasa, abasunguli, abaqambi nabaculi bomhlaba wakho. Indaba ebonakalayo enamandla, efakwa kumawindi angama-30 ngaphezulu kwamazinga ama-5 amehlo avutha ngokusebenzisa isibhakabhaka esikhanyayo, futhi ngezinye izikhathi ibonakala ilandela isixuku njengoba zibuka ngokuzethemba ubusuku. Ngala mehlo abona ikusasa, umcabangi, umsunguli, umqambi nomdwebi: abasunguli bakusasa abazoshintsha umhlaba.
Ukwakhiwa Kwezangaphakathi Yethula umqondo kanye nomkhiqizo ojwayelekile ngendlela ekhangayo ngokwakhiwa kwesitolo, ngokuqondile emakethe yaseCanada kanye ne-Yorkeleum. Kusetshenziswa isipiliyoni sangaphambilini sokwenza indawo nezindawo zomhlaba wonke ukuthola futhi ukucabanga kabusha konke okuhlangenwe nakho. Dala isitolo esisebenza kakhulu, esingasebenzela kahle ithrafikhi ephezulu kakhulu, isikhala esiyinkimbinkimbi.
Exxeo Upiyano We-Hybrid Okunethezeka Mgqibelo 25 Juni
Phuket VIP Mercury Ihhovisi Lwesihlanu 24 Juni
Feiliyundi Isikhungo Sokuthengisa Lwesine 23 Juni
Itafula Lekhofi Ukufakwa Kobuciko Ukufakwa Ukusebenza Komcimbi Ukufakwa Kobuciko Ukwakhiwa Kwezangaphakathi